रश्मीको ‘हट एण्ड सेक्सी’ जलपरी अवतार… (फोटो/भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > बलिउड > रश्मीको ‘हट एण्ड सेक्सी’ जलपरी अवतार… (फोटो/भिडियो सहित)
अभिनेत्री रश्मी देसाइ सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय रहिन्छन् । उनले कैयौं टक शो पनि होस्ट गरेकी छिन् ।
यही बीचमा पछिल्लो समय रश्मीका केही तस्वीरहरु चर्चाको विषय बनेका छन् । अभिनेत्रीले नयाँ फोटोशुट गराएकी छिन् । तस्वीरमा रश्मी निकै बोल्ड देखिएकी छिन् । हदैसम्म खुला पहिरनमा देखिएकी रश्मीको फोटोसुटका तस्वीरहरु सामाजिक संजालमा निकै रुचाइएका छन् ।
रश्मीले तस्वीरमा पहेंलो रंगको डीप नेक जम्पसुट लगाएकी छिन् । पहेंलो र कालो रंगको ओभरकोट पनि लगाएकी छिन् । फोटो शेयर गर्दै रश्मीले लेखेकी छिन् ‘हाम्रो पछाडि के छ, हाम्रो अगाडि के छ ? यो त्योभन्दा निकै सानो कुरा हो कि हामीभित्र के छ ?
हामी कुनै पुतलीको सुन्दरता देखेर निकै खुसी हुन्छौं तर हामीले शायदै स्वीकार गर्न सक्छौं कि कस्ता परिवर्तन भोग्दै ऊ अगाडि बढिरहेको छ । बन्दरगाहमा एउटा जहाज सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ तर जहाज त्यहाँ राख्नका लागि बनाइएका हुँदैनन् । पछिल्लो समय उनक तस्बिर तथा भिडियो सामाजिक संजालमा निकै भाइरल हुने गरेका छन ।
स्याङ्जामा भयो कस्तो अचम्म! भारतमा हराएको ३५ वर्ष पछि जब घर खोज्दै आइपुगे शोभाकान्त (भिडियो हेर्नुस्)